आर्थिक समृद्धिको लागि अगरउड ब्यबसाय गरौ - Radio Roshi
आर्थिक समृद्धिको लागि अगरउड ब्यबसाय गरौ
in अन्तरबार्ता, रोशी खबर
आजकालमा के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले तत्कालै हामी अगरुठको प्रशोधन बनाउने तयारीमा छौँ । अबको चियापत्ति कारखाना लागि हाम्रो यो प्रशोधन केन्द्रको काम अगाडी बढिरहेको छ । त्यसैमा व्यस्त छु ।
यहाँ अगरुठ जडिबुटि संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के हो अगरउड बताई दिनुहोस् न ।
अगरुठ भनेको विश्वमा भएमा रुखहरुमध्येमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुख त्यसमा पनि जडिबुटि मध्यमा सबैभन्दा महङ्गो जडिबुटि यसलाई विश्वमा भएका रुखहरुमध्ये सबैभन्दा महङ्गो रुखमा गनिने एउटा गैरकास्थ वन पैदावार हो । यसलाई विभिन्न देशहरुमा विभिन्न भाषामा यसको फरक फरक नामावली हुन्छ । नेपाल र भारतमा चाहिँ यसलाई अगरुठ नै भनिन्छ । अंग्रेजीमा पनि अगरुठ नै भनिन्छ । त्यसभन्दा बाहेक अरु विभिन्न देशमा छुट्टाछुट्टै नामले चिनिन्छ । यो भनेको चाहीँ कस्तो हो भनेको, अगर भनेको यसको बिचमा जुन रुख हुन्छ , यो एक किसिमको रुख नै हो ।, गैरकाष्ठ पैदावार हुदैँ गर्दा पनि यसको बिचमा एक खालको चुरोप हुन्छ । जुन अन्य रुखहरुको भन्दा फरक खालको हुन्छ । बिचमा बन्ने जुन कालो खालको चुरोप हुन्छ, त्यसलाई नै अगर भनिने हो खासमा । त्यति सहजै यसमा अगरुठ निस्किदैन बिचमा चुरोप, अन्य रुखहरुमा जस्तै खयर, सिसौ, सालमा जस्तो बिचमा चुरोप त्यती सहज निस्किदैन । बिचमा चुरोप निस्किनलाई अलिकति हामीले प्राकृतिक रुपमा निकाल्नको लागि २५–३० वर्ष नै लाग्छ । त्यो कारणले गर्दा हामीले बिचमा यसलाई इनोकुलेशन गर्छौ, यो जुन एउटा नयाँ प्रविधि छ । त्यो प्रविधि अन्र्तगत रहेर हामीले यसमा चाँडै चुरोप निकाल्छौ । जुन चुरो रुखको बिचमा हामीले इनोकुलेशन गरिसके पछाडी निस्किने कालो पदार्थ हुन्छ , त्यसैलाई नै हामीले अगर भन्छौ । वास्तवमा यो कस्तो हो भने अहिले सम्म धेरै ठाँउमा धेरै खालका खेतिहरु भएका छन् रुखका, ति मध्यमा पनि अगरुठ भनेको चाहीँ हामीले अध्ययन गरिराखेका नै छौ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुख नै हो । यसको जरा देखि पात सम्म सबैप्रयोगमा ल्याउन सकिने र कुनै पनि चिज खेर जादैन । पातबाट चियापत्ति बनाउन सकिन्छ, इनर्जी पाउडर बनाउन सकिन्छ । यसको भित्री भाग जसलाई हामी चुरोप भन्छौ, त्यसबाट हामीले धुप बनाउछौ । त्यो चुरो भन्दा बाहिर भागबाट हामी त्यसको प्रशोधन गरेर त्यहाँबाट हामीले तेल, सेन्ट, पर्फयुम हरु बनाउछौ । यसको जराबाट हामी आर्युवेदिक औषधी बनाउछौ । त्यसैले अगरुठ भनेको बाह्रै महिना हरियाली भैराख्ने बसिराख्ने खालका एउटा रुख हो । जुन कि लभौली रुखहरुमध्यमा चाहीँ हामीले बुझे अनुसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुख हो ।
तपाईले एउटा जडिवुटि सहकारी संस्था नै खोलेर अगरुठको व्यवसाय गर्नुभएको छ, यो व्यवसाय गर्नका लागि कतिको खर्चिलो छ ?
खासमा यो व्यवसाय गर्न त्यतिको खर्चिलो छैन । हामीले संस्थागत रुपमा जादै गर्दा खेरी शुरुमा तिन जना भएर शरु गरेका थियौ , ललितपुरमा । अहिले हाम्रो टिम अलि ठुलो भैसकेको छ , लगभग १३६ जनाको टिम छौ । हामी व्यक्तिगत रुपमा अगाडी जादै गर्दा खेरी भोली अन्तराष्ट्रिय बजारमा बेच्नुपर्छ यसलाई हामीले, अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएर हामीले बिक्री वितरण गर्दै गर्दा खेरी व्यत्तिलगत रुपमा जानलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ । त्यो कारणले गर्दा हामी अहिले संस्थागत रुपमा गईरहेको छौ । अगरुठ जडिबुटि सहकारी संस्था भनेर दर्ता गरेर हामी जिल्ला वन विभागसँग समन्वय गरेर यो संस्थालाई अगाडी बढाउने प्रक्रियामा हामी अगाडी छौ । त्यस्तो धेरै ठुलो खर्च लाग्दैन सामान्यतया हामी १००–१५० देखि २००–२५० सम्मका बिरुवाहरु ल्याएर सामान्य अरु विरुवा रोपेकै हिसाबले पानी नजम्ने जमिनमा पनि गर्मी ठाउँमा मज्जाले लगाउन सकिन्छ ।
यो अगरउडको विषयमा लिएर एउटा, अगरुठको इनोकुलेशन भन्ने गरिन्छ , के हो इनोकुलेश अनि यो कतिको खर्चिलो प्रविधि हो यो पनि बताईदिनुहोस् न ।
अगरुठको इनोकुलेशन भनेको कस्तो हो भने यस रुखमा अन्य रुखमा जस्तो सहजै चुरो ननिस्किने कारणले गर्दा खेरी यसलाई चाहीँ चुरो चाहीँ निस्किछ तर प्राकृतिक रुपमा समय लाग्ने भएकाले यसलाई भगवानको काठको भनिन्छ, भगवानले प्राकृतिक रुपमै दिएको वर्दान भनिन्छ । यसको रुखमा स्वत आफै चुरो निस्कियो भने त्यो प्राकृतिक रुपमा भगवानले दिएको वर्दान नै भयो , एकदमै मुल्यमा बिक्ने तोलामा बिक्ने वस्तु भयो । त्यो त्यसरी प्राकृतिक रुपमा निस्किदै नगर्दा खेरी चाहीँ हामीले लगभग ५ वर्ष देखि हाम्रो ठाँउ, परिवेश अनुसार कस्तो हावापानी , कसरी विरुवा हुर्किएको छ ? त्यसमा भर हुन्छ । विरुवा राम्रो सँग हुर्किएको छ भने ५ वर्ष देखि हामीले इनोकुलेशन गर्ने गर्छौ । इनोकुलेशन भनेको चाहीँ यो रुखलाई हामीले एक किसिमको स्लाइन वा भाइरस लगाउँछौ । त्यो रुखमा भाइरस इन्जेक्ट गरिसकेपछाडी चाहीँ हामीले रुखलाई घाउँ लगाइदिने हो , त्यसैले हाफ्नो घाँउ विसेक पार्नका लागि त्यो रुखले प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्दछ । त्यो बेलामा रुखले आफ्नो घाँउ विसेक बनाउन जुन प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्दा गर्दै एक किसिमको त्यहाँ तरल पदार्थ उत्पादन हुन्छ , त्यो तरल विस्तार रुखको बिच भागमै जमेर त्यो कालो बन्दै जान्छ । त्यही नै हो , चुरो नै अगर हो ।
यो अगरउड व्यवसाय सञ्चालन लागि चाहिँ कस्ता कस्ता प्रक्रियाहरु होलान् तपाईहरुको प्रकृयाहरु के के छन् बताई दिनुहोस् न ।
अगरउड व्यवसाय सञ्चालन गर्न हाम्रो कस्तो भने गुणस्तर बिरुवा किनेर ल्याईसकेपछि हामी एकापट्टि विरुवा लगाउँदै जान्छौ । हामी पालिका, वडा मा हुन सक्ला पहिला शुरुमा हामीले त्यहाँ दर्ता गर्नुप¥यो । हामीले निजी वनको रुपमा त्यहाँ दर्ता गर्नुप¥यो । त्यहाँबाट जिल्ला वन समुहबाट समन्वय गरेर जिल्ला वन विभागमा दर्ता गर्नुप¥यो । त्यसै गरी हामीले तिन वटै तहमा दर्ता गरेर यो अगरुठलाई हामी सरकारी सेवा सुविधाहरु लिने हिसाबले सरकारी लेभलमा पनि हामी लिङ्क बढाएर त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ । भोली अन्तराष्ट्रिय बजारमा जाँदा खेरी स्विकृति लिएर मात्र यो चुरोलाई हामीले बाहिर पठाउन सक्छौ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा लानका लागि विभागमा स्विकृति नलिएर जान नसक्ने भएका कारणले हामीले शुरुदेखि वा लगाउने बेला देखि नै स्टेप बाई स्टेप दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईहरुले अगरउडको एउटा व्यवसाय नै सञ्चालन गर्नुभएको छ, सहकारी नै खोलेर लाग्नु भएको छ अनि अन्तराष्ट्रिय बजार भन्दै गर्दा खेरी तपाईहरुले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ कुन कुन देशमा गएर बेच्न सक्नुहुन्छ ?
हामसिँग अहिलेसम्म सम्पर्कमा रहेको भनेको इन्डोनोशिया , त्यहाँका पार्टीहरुसँग हामीसँग अगाडी देखी नै हुनुहुन्छ, त्यसपछि थाइल्याण्ड र भारत सँग हाम्रो सम्बन्ध छ ।अहिले तत्काल आएर हामी यहीँ तिन ठाँउमा संस्थासँग सम्पर्कमा रहेको भनेको यहि तिन ठाउँमा पठाउन सक्छौ । हाम्रो व्यापारीहरु यहीँ आएर लानुहुन्छ । वहाँहरुको लागि हामीले केहि गर्न पर्दैन न । उहाँहरु आफैले आएर प्रशोधन गरेर लानुहुन्छ , भारतमा लान चाहीँ । त्यो भन्दा बाहिरी देशमा लानको लागि चाहीँ हामीले यहि आफै प्रशोधन गरेर तयारी माल चाहीँ बाहिर पठाउनुपर्ने हुन्छ , इन्डोनोशिया र थाइल्याण्डमा चाहीँ ।
तपाईँ एउटा जल्दो बल्दो युवा हुनुहुन्छ , देशमा धेरै युवाहरु रोजगार नभएर विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । तपाइ एउटा युवा भइकन पनि देशमा नै केहि गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ । आकर्षित हुनु भएको छ , यो व्यवसाय प्रति के कारणले हो ? तपाईले आर्थिक संवृद्धि नै ल्याउछु भनेर हो वा चाहीँ मेरो भविष्य यसमा नै छ भनेर देख्नुभयो वा के चाहीँ कारण तपाई यो व्यवसायमा आकर्षित हुनुभयो ?
यो विषय चाहीँ कस्तो छ भने मैले लामो समयम्म मैले पनि गाउँबाट शहरसम्म १५ वर्ष बसेर , भ्यालीमा बसिसके पछाडी कस्तो हुन्छ रहेछ भने हामीले काम गर्दे गर्दा खेरी चाहीँ अलिकति लामो समय अथवा दिर्घकालिन आम्दानी हुने खालको काम गर्नुपर्ने रहेछ । अरुकामहरु गर्दै गर्दा खेरी व्यापार व्यवसायहरु गर्दैगर्दाखेरी दैनिक आम्दानी हुने खालको , भविष्यसम्म आम्दानी हुने खालको अवसरहरु देखिएन । जुन बेला सँग हामीले काम गर्छाे त्यही बेलासम्म मात्रै आम्दानी हुने व्यापार व्यवसाय अरु जे गर्दा पनि , जस्तै हामीले यहि रुख अध्ययन गर्दा पनि रुख लगाउदा खेरी मानौ एकचोटी लगाइसकेपछि हामीले सय वटा मात्रै अगरुठको रुख रोपेका छौ भने विस्तार विस्तार हामी आवश्यकता अनुसार सात वर्ष देखि हामी काट्न शुरु गर्छाै । हामी पाँच वर्ष बाट इनोकुलेशन शुरु गरेर २ वर्ष छोडेपछि सात वर्षबाट काट्न शुरु गर्दे गर्दा खेरी १०० वटा रुख लगाउने हो भने देखि हामी बाँचुञ्जेललाई पुग्छ । जति हामीले हाम्रो आवश्यकता हुन्छ नि , तिहरु ढुक्क सँग पुरा गर्न सकिन्छ । बेच्नको लागि त्यस्तो केही समस्या नै छैन । यो भन्दा राम्रो अरु विकल्प नै देखिएन । आर्थिक रुपमा अलिकति सक्षम हुन का लािग । जस्तै म जस्तो गाँउमै बसेर केही गरौ, अलिकति साथीहरुपनि आर्थिक रुपमा अगाडी बढाउन भनेर अगाडी बढ्दै गर्दा खेरी अरु विकल्प केहि पनि देखिएन । सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको थारै लगानीमा लामोसमयसम्म आम्दानी गराइ रहनको लागि चाहीँ अगरुठ भन्दा अरु उत्तम उपाय नदेखेर मैले यो व्यवसायमा लागेको हो ।
अहिले तपाईले वा तपाईको सहकारी ले कति वटा विरुवा रोप्नुभएको छ वा त्यसको उपलब्धि कहाँसम्म पुगेको छ त्यो पनि बताईदिनुहोस् न ।
हालसम्म, मैले अगरुठको व्यवसाय शुरु गरेको आफ्नो २०७५ साल श्रावण १४ गते देखि शुरु गरे देखि आएर अहिले २०७८ साल भदौसम्ममा २३५०० बिरुवा लगाइसकेका छौ । अब अरु विरुवाहरु हामी लागाउने क्रममा छौ । साथीहरु अगाडी बढदै हुनुहुन्छ । र बिचमा हामी जस्ता बाग्मती गाँउपालिका, ललितपुरबाट अगरुठको लागि केही अनुदानका रकमहरु लेराएका छौ वृक्षरोपनको लागि त्यस्तै गरी ललितपुरबाट पनि हामीले एकपटक अनुदानका कार्यक्रम ल्याइसकेका छौ विरुवा वृक्षरोपनको लागि । अब आगामी दिनमा चाहीँ जिल्ला वन मार्फत विरुवा प्रशोधनका लागि भनेर कार्यक्रमहरु माग गरिरहेका छौ । जिल्ला वनले त्यसको लागि छलफल गर्दै छ भने वन विभागले चाहीँ हाम्रो इनोकुलेशन + हाम्रो अगरुठको अध्ययन भ्रमणको लागि भनेर वन विभागले पनि अलिकति बजेट छुट्याउने प्रक्रियामा छ । हामीले माग त्यसरी गरी रहेका छौ । त्यसरी अगाडी बढ्दै छौ ।
जस्तै यो विरुवा रोप्दा खेरी तपाईले धेरै विरुवाहरु लगाएका छौ , यो चाहीँ हुर्किदै छ भन्दै गर्दा खेरी यसको ग्यापिङ कतिको हुुनुपर्छ, जुन कतिको फरकमा रोप्नुपर्छ, खाल्दो कति गहिरो खनेर रोप्नुपर्छ, यसको विरुवा कहाँ पाइन्छ ? त्यो पनि बताई दिनुहोस् न ।
यसको विरुवा कस्तो हुन्छ भने विरुवा लगाउनको लागि जहाँबाट ल्याएर लगाउनु भए नि भयो । हाम्रै ललितपुरको गिल्लीमा जति पनि विरुव पाइन्छ , अर्काे कुरा अरु नर्सरीहरुमा पनि पाइन्छ ।अरु नर्सरीमा चाहीँ अलिकति महङ्गा हुन्छन् कतिपय नर्सरी हरुमा चाहीँ बिक्री मात्र गर्ने लक्ष्य हुन्छ । नर्सरीहरुको काम भनेको चाहीँ विरुवा बेच्ने मात्र हो । एउटा विरुवाको हाम्रो रु १२५–२५० सम्म फल्छ , त्यसको साइज हेरेर । ठुलोको लागि रु २५० पर्छ , जुन विरुवा ति फुट भन्दा माथी हुन्छ ।
यो तपाईहरुले बेचिसकेपडाडी नसर्ने मर्ने कतिको सम्भावना छ ? मर्नुको कारण चाहीँ के हो ?
यस्तो हुन्छ, हामीले बेचेको विरुवा हामीसँग भएको बिरुवा चाहीँ अहिले १० प्रतिशत हुन्छ त्यसमा मर्ने सम्भावना चाहीँ ७–१० प्रतिशत हुन्छ । यो हावापानी भन्दापनि ,बिरुवा रोप्ने बेलामा तरिका नमिलेमा धेरै मर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको विरुवा लगाउदैँ गर्दा खेरी पहिले खाल्डो खनेर , कम्तिमा पनि एक महिना खाल्दो खनेर छोड्नुु प¥यो , २ फिट चौडाई र ३२ फिट गहिराई भएको खाल्दो खनिनुप¥यो । त्यसमा मल र माटो मिक्स गरेर खाल्डो पुरेर कम्तीमा पनि एक महिना राखेपछि अनि मात्र विरुवा रोप्नुपर्ने हो । त्यसरी रोप्दा खेरी चाहीँ विरुवा मर्ने सम्भावना हुदैँन ।
जस्तै तपाईले यो भन्दै गर्दा खेरी, अगरउडको लागि चाहीँ कस्तो हावापानी ठिक हुन्छ, यो कुन भुभागमा राम्रो हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न ।
अगरुठ कै लागि हावापानी भन्ने हो भने समुही सतहबाट हामीले १८०० मिटरसम्मको उचाईमा हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिन्छ । तर एकदम सही हावापानी भनेको चाहीँ ५०० देखि १२०० मिटरसम्मको हावापानी चाहीँ एकदमै छिटो बढ्छ त्यो हावापानी मा । अति त्यो विरुवा लागाउने जमिनको कुरा गर्ने हो भने हल्का दोमत माटो एकदम राम्रो हुन्छ यसको लागि र माटो पि.एच भनेको चाहीँ ५.५ देखि ६.५ सम्म भएको माटोमा एकदम राम्रो , पानी नजम्ने किनभने पानी जम्दा खेरी यो विरुवा मर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । पानी नजम्ने र घाम लाग्ने यसमा कम्तीमा पनि दिन भरीमा ७०% चाहीँ घाम लाग्ने हुनुपर्छ । भिरालो पारिलो जमिनमा एकदमै राम्रो हुन्छ यो । सम्म ठाउँमा पनि हुन्छ हुन त तर पानी जम्नु हुदैन , घाम चाहीँ अलि बढि लाग्ने ठाँउमा हुनुप¥यो ।
भनेसी नेपालको पहाडी क्षेत्रको अधिकांश भुभागमा खेति गर्न सकिन्छ, तपाइको यो जुन सहकारी लाई नेपालसरकारबाट कुनै अनुदान प्रापत गर्नुभएको छ या नेपाल सरकारले अझ केहि गर्दे हुन्छ भन्ने तपाईलाई के लाग्छ ?
हजुर, अहिलेसम्म सरकार मार्फत त्यस्तो अनुदान भनेर विरुवाहरुको लागि एकचोटी अनुदान लेराइसकेका छौ यो भन्दा अघिल्लो प्रक्रियाको लागि चाहीँ सरकारको तर्फबाट हाम्रो लागि चाहीँहरु अनुदान भन्दै गर्दा चाहीँ इनोकुलेशन को लागि चाहीँ ट्रेनङहरु उपलब्ध गराइदिएर त्यो मार्फत हामीलाई इनोकुलेशन प्रशोधन गर्न प्रति हाम्रो अहिले चिया बनाएर बेच्ने गरेका छौ । अगरुठको चिया भनेको चाहीँ ग्रिन टि भन्दा पनि उच्च लेभलको चिया हो ।हामीले चिनबाट ल्याएर यहाँ ठुला ठुला होटलहरुमा अहिले पनि चलाई राखेका छौ ।अगरुठको चिया भनेको चाहीँ प्रति केजीको लगभग ४०– हजार पर्दछ ।
यो किन यतिको महङ्गो भयो, यसले रोगको निदान हुन्छ की या के हुन्छ?
होइन यो चिया भनेको चाहीँ अगरुठबाट बन्ने, यसमा एन्टिअक्सिजनको मात्रा एकदमै ज्यादा हुन्छ । त्यसको हुने भएकोले गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने भयो एक , चिया खादै गर्दा खेरी , अर्काे कस्तो हुन्छ भने हामीले जुन दुध,कालो चियाहरु जस्तै अरु चियाहरु खाइरहेका छौ नि अरु चियाहरु खादा खेरी चाहीँ तपाइले नियमित खाइरहनुहुन्छ । त्यो चियाले हाम्रो पेटमा एक किसिमको दाग बस्छ । नियमित खादै गर्दा दागको लेयर बन्दै बन्दै गहिरहेको हुन्छ ।त्यो लेएर चाहीँ यो चिया खादै गर्दा त्यो लेयर बन्ने होइन त्यसलाई काट्छ वा सफा गर्दछ । त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि किसिमको साइड इफेक्ट नहुने स्वास्थ्यको लागि एकदम फाइदा हुने भएकाले अगरुठको चिया चाहीँ एकदम महङ्गोेमा बेच्ने , राम्रो सम्भावाना भएको चिया भित्र पर्दछ ।
भनेसी अगरउडको लागि भनेर नेपाल सरकारबाट अनुदान आइरहेको छ ? कति पैसा लिनुभयो ?
हामीले अनुदान हामीले अहिले एक लट हामीले रु.एक लाख पचास हजार लियौ, अर्काे लट रु.दुइ लाख गरी हामीले रु. तिन लाख पचास हजार लिइसक्यौ , बिरुवाको लागि चाहीँ ।
व्यक्तिगत मार्फत की सहकारी मार्फत ? कति जना सदस्य हुनुहुन्छ सहकारीमा ?
हजुर सहकारी मार्फत, सहकारीमा अहिले ८८ जना सदस्य छौ । बिरुवा लगाउने बाहेक त अरु साथीहरु हुनुहुन्छ । लगभग १५०–२०० जना विरुवा नलगाउने साथीहरु चाहीँ विरुवा लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
जस्तै विरुवा लगाउनको लागि तपाईहरुले सहकारी मार्फत चाहीँ , यसरी लगाउनुहोस् भनेर कुनै तालिमहरु दिनुभएको छ या गोष्ठि, ओरिन्टेशन हरु केही राख्नुभएको छ ?
हामीले अहिले सम्म कस्तो गरिराखेका छौ भने यो विषयमा जिल्ला वनको समन्वयमार्फत उहाँहरुले हाम्रो बाग्मती गाँउपालिका ४,५,६ र ७, यि चारवटा वडालाई चाहीँ अगरउडको पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । त्यही घोषणा अनुसार उहाँहरुले अभिमुखिकरण तालिमहरु ल्याईरहनु भएको छ । अहिले सम्म हामीले तिन वटा तालिम चलाइसकेका छौ । अगरुठ खेति कसरी गर्ने, के गर्ने ,भोलि यो विषयमा कसरी अगाडी बढ्ने अन्तराष्ट्रिय बजारमा कसरी जाने यसबाट के के उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसबाट उत्पादन हुने विभिन्न खालका वस्तुहरु छन् , जस्तै यसबाट हामीले कस्मेटिक सामानहरु पनि उत्पादन गर्न सक्ने भयौ , औषधी उत्पादन गर्न सक्ने भयौ, चिया, ठुल्ठुला फर्निचरहरु उत्पादन गर्न सक्ने भयौ । तर फर्निचर उत्पादन चाही एकदमै धनि मानिसहरुले ामत्र उत्पादन गर्न सक्छ अलिकती सामान्य मान्छे जस्तै हामी आफैले खेती गर्दैगर्दा त आफ्नो हिसाबले गर्न सकिने भयो । किनेरै ल्याएर त्यो फर्निचरहरु बनाउने सम्भावना चाहीँ हामीले सक्दैनौ । पछिल्लो लटमा के होला त्यो कुरा छदैँ छ । तत्काल को लागि चाहीँ त्यो काठ एकदमै महङ्गो हुन्छ त्यो कारणले गर्दा धनि धनि मानिसहरुले टेबल, कुर्सी, सोकेश हरु बनाएर राख्दा खेरी चाहीँ कोठै भरी बास्ना आउने हुन्छ । एकचोटी बनाइसकेपछि त्यसको चुरोबाट सयौँ वर्षसम्म बास्ना आउने त्यस्तो खालको हुन्छ । त्यस्ता खालका धेरै सामाग्रीहरु बनाउन सकिन्छ । अब यो प्रक्रियामा हाम्रो सबैभन्दा प्रथम प्रक्रिया भनेको चाहीँ चिया बनाउने नै हो । किनभने दुई वर्ष देखि हाम्रो आम्दानी शुरु हुन्छ । पात टिपेर , पातबाट हामीले दुई वर्ष शुरु गरिसकेपछि विस्तार विस्तार पाँच वर्षमा इनोकुलेशन शुरु हुन्छ । सात वर्ष देखि त हामीहरु रुखै काटेर बेच्न शुरु गर्छाे , आवश्यकता अनुसार । हामी इनोकुलेशन गरेको दुई वर्ष देखि त चुरो निकाल्न थालिहाल्छौ । त्यसमा चिन्ता भएन । त्यसपछाडी सात वर्ष देखि हामी रुख काट्न शुरु गर्छाै । यसमा खास त्यस्तो लामो समयावधि पनि लाग्दैन र ठुलो खर्च पनि लाग्दैन र थोरै लगानीबाट धेरै ठुलो आम्दानी भनेको लामो समयसम्म आम्दानी लिन सक्ने भएकोले एकदमै राम्रो छ यो चाहीँ ।
अगरुठको विषयमा यति भन्नुभयो , अगरउडको चाहीँ तपाइले तिनवटा mिाइदाहरु देखाउनु भयो , एउटा चाहीँ भित्रको चुरो, अनि जरा र पातको कुरा गर्नुभयो हाँगा विगा हुन सक्छन् त्यसको बोक्रा हुन सक्छन् यो चाही केही प्रशोधन गरेर केहि निकाल्न सक्छौ कि नाई ?
यस्तो हुन्छ, त्यो पनि सकिन्छ । कुन बेला सकिन्छ जब यसमा चुरो पस्छ नि रुखमा । रुखमा चुरो नपसे सम्म पातको मात्र प्रयोग गर्छाै । चुरो नपसिञ्जेल हामीले यसको बाहिरी बोक्राहरु पनि हामीले प्रयोगमा लयाउन सकिदैनौ । जब चुरो पस्छ , त्यसका हागाँहरु, बाहिरी बोक्राहरु सबै काम लाग्छ, कनै पनि खेर जाँदैन यसको । त्यो पसिसके पछाडी केहि पनि खेर जाँदैन सबै प्रयोगमा आँउछ ।
जस्तै तपाईले हाँगा विँगाहरुको लागि अथवा चुरो निकाल्नको लागि त्यसको प्रविधि होला त्यो भित्रको चुरो मात्र निकाल्ने एउटा , अब हामीले काठ मिलमा चिरे जस्तो चिर्ने त होइन होला ? कसरी निकाल्ने त्यो प्रविधि कहाँ छ , कोसँग या या तपाईहरुले उत्वादन गर्नु भएको के छ ?
होइन, हामीले त्यो प्रविधि दुई जना साथीहरुलाई दक्षिण भारतको आसाममा टे«निङमा पठायौँ । ति साथीहरुले टे«निङ लिएर आउनुभएको छ । त्यो चुरो निकाल्नको लागि अब हामीले भाली आवश्यकता अनुसार अलिकति साथीहरु उताबाट ल्याउन पर्ने अवस्था भयो भने हाम्रो सम्पर्कमा उहाँ हुनुहुन्छ । ठुलाठुला व्यापारीहरु , जो अगरउडको विषयमा धेरै अगाडी भइसक्नु भएका आसामका साथीहरु हुनुहुन्छ ।उहाँ हरु आएर यहाँ सिकाइदिनुहुन्छ कसरी चुरो निकाल्ने के गर्ने अरु काठको जसरी सजिलै काटेर चुरो निकाल्ने होइन । यसमा राम्ररी एकदमै विस्तार थोरै थोरै गरेर चुरो निकाल्नु पर्छ । निकालेको त्यो धुलो समेत बिक्ने भएकाले पाइने हुन्छ । यसमा खेर भनेको केही पनि जादैँन । जस्तै काठै चिर्नु भयो भने त्यो निस्किएको धुलो पनि बिक्छ । प्रति के.जी.को दरले बिक्छ ।त्यो दर भनेको चुरो कस्तो खालको निस्किन्छ त्यसमा भर हुन्छ । हाभमीले ५ वर्ष देखि इनोकुलेशन गर्दे गर्दा ७–१० वर्षको एउटा रुखबाट सामान्य २–१० किलो सम्म चुरो निकालेको हामीले आफ्नै तालिममा जाँदा हेरेर आइसकेका छौ । एउटै रुखबाट त्यती सम्म निस्किन सकिन्छ । प्रति के.जी चुरोको कति पैसा जान्छ भन्दै गर्दा खेरी हामीले आफैले हेरेर आएको हामीले प्रयोगात्मक रुखमा देखेको हिसाबले भन्ने हो भने चाहीँ चुरो निकाल्ने क्रममा निस्केको धुलो ८–१० हजार किलोमा, आई.सि. मा बिक्छ । अनि बिचको जुन मुख्य बिन्दुको चुरो छ , हामीले अलिकति गुणस्तर क्वाइलिटीको जानुपर्ने भएर अलिकति गाह्रो भयो । अलिकति ठिक्कै खालको क्वाइलिटिको चुरो हेर्र्दे गर्दा खेरी चाहीँ हामीले ५ लाख किलो प्रति केजी सम्मको हेरेर आएका छौ ।
तपाईले यसो भन्दै गर्दा , तपाईको यो व्यवसायले आर्थिक संवृद्धिमा कस्तो सहयोग पु¥याउँछ वा पु¥याउदैन ?
आर्थिक संवृद्धिमा एकदमै राम्रो टेवा पु¥याउँछ , यो व्यवसायले । कसरी पु¥याउँछ भने जति ठुलो मिहिनेत गरे पनि अहिले हामीले जुन व्यवसाय शुरु गरेका छौ त्यसरी कमाउने सम्भावना कहि पनि देख्दिन म चाहीँ । १०० वटा रुख लगाउँदै गर्दा खेरी पनि सय सवटा रुखमा हामी ९५ वटा मात्रै पनि चुरो निस्किदै गर्दा खेरी ९५ वटा रुखको ७ वर्ष पछाडी एउटा रुख बराबर दुई लाखकै हिसाबले गर्ने भने पनि धेरै ठुला आम्दानी हुन्छ । सय वटा रुख लगाउने भनेको जम्मा एक रोपनीमा हो । एक रोपनी हामीले ९०–१०० वटा रुख लगाउन सक्छौ । एक रोपनी १०० वटा विरुवा लगाएर २५–३० हजार खर्च गरेर अहिले लगानी गर्दे गर्दा खेरी सात वर्षपछि त हामीले त्यहाँ धेरै ठुलो आम्दानी भैसकेको हुन्छ । आर्थिक रुपमा संवृद्ध बनाउनका लागि अरु विभिन्न खालको कामहरु, विदेश जानुपर्ने , अरु ठाँउमा गएर धेरै दुःख गर्नुपर्ने , काम गर्नुपर्ने जस्तोलाई चाहीँ लाग्दैन ।
त्यस्तै यो रुखलाईएउटा बास्ना आउने रुख भएको कारणले गर्दा अन्य वन्यजन्तुहरुबाट कोर्तने , खाने, चिथार्ने ,भाच्ने सम्भावना कतिको रहन्छ ?
अहिले सम्म चाहीँ त्यतीको छैन । अनि त्यसमा बास्ना त्यती खेर मात्रै आउँछ जतिबेला की रुख सुक्नुपर्छ कि काट्नै पर्छ । कि काट्न पर्याे कि सुक्न प¥र्याे , त्यतीकै चुरोको बास्ना बाहिर निस्किने होइन । त्यो कारणले गर्दा खेरी कुनै पनि वन्यजन्तुले त्यो खालको दुःख दिने, सताउने भन्ने यो रुखलाई हुदैँन । हरेक हिसाबले जस्तै बादल धेरै लाग्ने ठाँउमा पनि यो रुख लगाउन पाइयो । अरु जनावरहरुले दुःख दिने ठाँउमा पनि यो रुख लगाउन पाइन्छ ।यसमा खास त्यस्तो अरु असर भनेको केही पनि पर्दैन । प्राकृतिक रुपमै तपाईले यो छोड्दिने हो भने इनोकुलेश नगरी प्राकृतिक रुपमै छोड्दिन्छु भन्ने हो भने त रुख रोपेर ८–९ वर्ष भइसके पछि त्यसलाई काटेर एकदमै धेरै दिनुपर्छ । उता आसाममा चाहीँ प्राकृतिक रुपमा अहिलेपनि गरिरहेको छन् । उता इनोकुलेशन भनेको एकदमै धनी धनीहरुले वा ठुलाठुला व्यवसायले गर्दछन् । त्यहाँ चाहीँ त्यो रुखलाई के गर्छन् भने धेरै दुःख दिन्छन्, हाँगाहरु सबै काट्ने प्रत्येक वर्ष , अनि बिचको त्यो काण्डमा पनि ठाँउ ठाँउमै चोटै चोट , धेरै चोट बनाएर उनीहरुले त्यसरी छोडिदिन्छन् । उसको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नको लागि चाहीँ धेरै घाउँहरु बनाउने, बञ्चरो ले हान्ने , फेदमा आँगो बाल्ने त्यो चाहीँ परमपरागत प्रविधिहरु छन् हैनन् । त्यस अन्र्तगत चाहीँ धेरै दुःख दिने त्यस्तो सिस्टम हुन्छ । यसलाई अब जसरी पनि भाइसर नलगाईकन चाँडै यसमा चुरो निकाल्न सकिदैँन । दुस्ख नै दिन खाल्ने टाइपको रुख को यो चाहीँ त्यो कारणले गर्दा लगाउन पनि त्यती धेरै गाह्रो छेन । एकचोटी रोपिदिई सकेपछि के गर्नुपर्ला, कसो गर्नुपर्ला भनेर धेरै तनाव दिनुपर्दैन यसलाई लगभग २ वर्ष सम्म बिरुवा सानो भैसकेसम्म हुर्काइसकेपछि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ ।
यो रुख तपाइले जुन आम्दानी लिने बेलासम्ममा कत्रो हुन्छ ?
तपाइले यसो बुझ्नु न हामीले कुन बेला आम्दानी लिन सक्छौ भने एउटा नर्मल पोलको साइज हुन्छ । बतिको नर्मल खालको सानो खालको पोलको साइजमा रुख हुदँै गदौ खेरी हामी आवश्यकता अनुसार काट्न सक्छौ । त्यसमा चुरो बनीसकेको हुन्छ र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
जस्तै तपाईले ललितपुरको बाग्मती गाँउपालिका वडा नंं ७, नागटारमा तपाइहरुले प्रशोधन केन्द्र राख्दै हुनुहुन्छ , प्रशोधन केन्द्रमा के के तयार गर्नुहुन्छ , के के धारणा, विचार राख्न खोज्नुभएको छ या चियापत्ति मात्र निकाल्न खोज्नुभएको छ या चुरो नै निकाल्नु हुन्छ वा के के गर्नुहुन्छ ?
हामीले त्यहाँ शुरुको स्टेजमा चाहीँ चिया बौ शुरु गराँउछौ , प्रशोधन केन्द्र हामी तयारीमा छौ । हामी अब लगभग एक ढेड महिनाको बिचमा लाग्छ , त्यसमा बिचमा हामी चिया उत्पादन शुरु गरिसक्छौ । पहिलो लटमा चिया उत्पादन गर्छौ । त्योभन्दा पछि हामी त्यही बाट यसको चुरो पनि त्यही निकालेर त्यही प्रशोधन गरेर मात्र बाहिर पठाउँछौ हामी । त्यसरी तयार गरीराखेका छौ ।
त्यसरी चुरो निकाल्ने, प्रशोधन गर्ने क्षमता , तपाईहरुसँग जनशक्ति थियो ,
होइन, अहिलेसम्म हाम्रै सहकारीका साथीहरु सँग त्यो क्षमता छ । भोलि आवश्यकता अनुसार तालिमहरुमा बाहिर पठाउन पर्छ कि के के गर्नुपर्छ । हामी हाम्रै सहकारी मार्फत अगाडी बढाउछौँ ।
रेडियो सुनेर धेरै साथीहरुले तपाईहरुको यो विषयमा राम्रो जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ , त्यस्तै तपाई विदेशमा बस्ने धेरै साथीहरुले पनि यो कार्यक्रम सुन्नुभयो होला उहाँ बस्ने साथीहरुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
देश तथा विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण साथीहरु जो हुनुहुन्छ , युवाहरु अझ विशेषत के भन्छु भने , जो के गरौँ भनेर अगाडी बढिरहनु भएको छ, यता उता कतै गर्दा नि हुदैँन त्यो दौड धुपमा लागिरहने निराश भएर हिड्नु भएका मेरा साथीहरुलाई चाहीँ यो कृषिमा लाग्दिन भन्दै गर्दा खेरी पनि,म अरु अरु काम गर्ने कृषिमा पनि धेरै गाह्रो भयो र एकदम कनफ्युजमा हुनुहुन्छ । के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हुनुहुन्छ भने आउँनुस अगरउडमा सहकारी गरेर अगाडी बढम् हामी सहकारी मार्फत पनि अगाढी बढ्न सकियो । यहाँहरुसबैलाई स्वागत गर्न चाहान्छौ । हाम्रै सहकारी मार्फत पनि अगाडी बढ्न सकिन्छ अथवा यहाँहरु आफ्नै ठाँउबाट आफ्नै हिसाबले अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ । विभिन्न जिल्ला वन कार्यलय तथा वन विभाग सँँग समन्वय गरेर अथवा हामीसँग समन्वय गरेर यहाँहरु अगाडी बढ्नुहोस् यहाँ हरु सम्पूर्णमा स्वागत गर्दे अगरुठको एकदम उज्वल भबिष्य छ यसको बजार व्यवस्था देखि हाम्रो उत्पादन देखि बजार व्यवस्थापन सम्म कुनै त्यस्तो समस्या छैन । सरकारी व्यवसाय बाट पनि केही त्यस्तो समस्या होला भोली भनेर डराउन पर्दैन । त्यसमा हामी सम्पूर्ण मिलेर अगाडी बढ्न हामी तयार छौ ।
हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम अन्तिमा छौ , जाँदा जाँदै सम्पूर्ण अगरउडको विषयमा रेडियो श्रोताहरुलाई आफ्नो एउटा केही प्रेरणादायी भनाईहरु छोडेर जानुहोस् न ।
धन्यवाद, खासमा ज–जसले देश वा विदेशमा यो रेडियो सुनेर बसिरहनु भएको छ यहाँहरु सम्पूर्णमा मैले के भन्न चाहान्छु भने हाम्रो देशको आर्थिक उन्नतीको एकदमै महत्वपूर्ण पाटो भनेको यो हामीले जुन शुरु गररहेका छौ । अगरउडको वृक्षारोपन गर्ने जुन अभियान शुरु गरिराखेका छौ । एकदमै महत्वपूर्ण आर्थिक प्रर्वधनको पाटो यहि हुन सक्छ ।यहाँहरुले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोला , बmझ्नुहोला सबैतिर । सबैतिरबुझिसकेपछि यहि पेशालाई अगाडी बढाउनको लागि सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दै विदा हुन चाहान्छु ।
काभ्रे सहित नेपाली काँग्रेसको वडा अधिवेशन सात जिल्लामा भोली हुदै
काभ्रेबाट २०९.६३ क्यूफिट अबैध काठ सहित दुई जना पक्राउ